China Screw Conveyor Warshada iyo Warshada |Chinatown
Gaadhi-qaadeheenna fur-fure wuxuu ku habboon yahay gudbinta budada, granular, burushka, alaabada dhuuban iyo kuwa aan dhab ahayn sida dhuxusha, dambaska, sibidhka, badarka, iyo wixii la mid ah.Heerkulka walxaha ku habboon waa inuu ka yaraado 180 ℃
Gaadhi-qaadeheenna fur-fure wuxuu ku habboon yahay gudbinta budada, granular, burushka, alaabada dhuuban iyo kuwa aan dhab ahayn sida dhuxusha, dambaska, sibidhka, badarka, iyo wixii la mid ah.Heerkulka walxaha ku habboon waa inuu ka yaraado 180 ℃.Haddii maaddadu ay sahlan tahay in la xumeeyo, ama la kordhiyo, ama maaddadu ay tahay mid aad u dhejis ah, laguma talinayo in lagu gudbiyo mashiinkan.
Usheeda dhexe oo lagu alxanayo biro ayaa lagu rakibay daasad nooca weelka ah.Alaabooyinka granular ama xumbada waxaa lagu quudiyaa mishiinka waxaana si toos ah horay loogu sii gudbiyaa meesha laga soo dajiyo iyada oo la adeegsanayo furka wareega ee ku alxan shabka.
Si aad u heshid meel ku haboon qaade hadhuudh, maroojiye cunto, qaada calafka ama malt, waxa aad lagula talinayaa in aad tixgeliso alaabtayada oo faahfaahintoodu hoos ku taxan yihiin.
1. Qalabku wuxuu la socdaa naqshad qaabaysan iyo wax-soo-saar heersare ah.
2. Meelaha laga soo galo iyo meelaha laga baxo waxa loo habayn karaa hadba sida loo baahdo
3. Guryaha boodhka ku dheggan waxay keenaysaa nadaafad heer sare ah.
4. Gaadhida furka waa ay fududahay in la ilaaliyo.
5. Hantida isticmaalka tamarta yar ee shaqaynaysa ayaa diyaar ah.
6. Dhammaan qaybaha waxay ka samaysan yihiin maaddooyin heer-cunto ah ama waxay la socdaan dahaar gaar ah oo heerka cuntada ah.
7. Albaabka buuxdhaafay oo leh furaha ilaalinta gaarka ah ayaa diyaar ah.
8. Weelka gelitaanka waxa lagu rakibay caag duullimaad adag oo horumarsan oo labbiska qashin qubka.
9. Meesha dhex dhexaadka ah ee qaadiyaha biraha waxay la timaaddaa albaab siliid ah.
10. Dahaarka-lakabka badan ee ka-hortagga daxalka ayaa loo isticmaalaa codsiyada dibadda.
11. Habka wadista tooska ah ayaa diyaar ah.
12. Gudubiyaha furaha, waxa jira isku xidhid dabacsan oo u dhexeeya dawaynta iyo shafka furka.
13. Habka jiifka ah iyo qaabka u janjeera labaduba waxay diyaar u yihiin gudbinta, qaybinta, ururinta, isku dhafka iyo dheecaanka.
14. Istarooggu wuxuu ku xidhaa xadhiga ka laadlaadsan, shafka madaxa, dabada xidhmooyinka xidhan.Markaa dhaqdhaqaaqyada axial looma baahna rakibaadda, iyo kala goynta, samaynta hagaajinta mid ku habboon.
15. Sariiraha madaxa iyo shafka dabadu waxay labaduba ka baxsan yihiin daashka qaadiyaha furaha.Xarig kastaa waxa ay la timaadaa tignoolajiyada xidhidh ee lakabyo badan si loo kordhiyo nolosha adeegga
Muuqaal ikhtiyaari ah
1. Iskoolada birta ah iyo weelka waxaa lagu dari karaa qamadida qoynta ama daqiiqda si loo helo nadaafad wanaagsan.
2. Furaha nooca paddle-ka ayaa loo qaataa in la isku qaso.
3. Jaakad rinji ah oo la habeeyey ayaa ikhtiyaar u ah qaadiyahayada kabaalka.
4. Albaabka hoose waa ikhtiyaari nadiifinta fudud ee furka iyo saxarada.
Nooca Max.Awoodda (t/saac) Max.REV(r/min) Dhexroorka daboolka (mm) Inta udhaxeysa iskoorka (mm)
Hore: Soo wareejinta Silsiladda Isku xirka Wareegga
Xiga: Gaadhida Silsiladda
Daareeyaha Alaabta Cufnaanta Hoose
Soo wareejinta Silsiladda Isku xirka Wareegga